बिदाको दिन सफाइ र जनचेतना- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
बिदाको दिन सफाइ र जनचेतना
नवलपरासी पश्चिमका युवा सामाजिक काममा सक्रिय
आश्विन ३०, २०७५ नवीन पौडेल
परासी — बिदाको अवसर पारेर यहाँका केही युवा सार्वजनिक स्थल सरसफाइ र ट्राफिक जनचेतना जगाउन जुटेका छन्  । बजार विस्तार हुँदै जाँदा सडक किनारमा फोहोर बढेको र चाडपर्वका बेला चालकले सवारी साधन तीव्र गतिमा चलाउने गरेका कारण यहाँका युवा सचेतना जगाउन जुटेका हुन्  ।
कावासोतीका ३० वर्षीय एलएन दवाडी बिदाको दिन बिहानै मास्क र पन्जा लगाएर कुचो एवं डस्बिन लिई सरसफाइमा जुट्छन् । उनलाई सुधन लम्साल, ओमकार घिमिरेसहितका २०/२५ जना युवकयुवतीले साथ दिन्छन् ।
युवाहरूबीच अघिल्लो दिन नै सरसफाइ गर्ने स्थल र संघसंस्थासँगको सहकार्यबारे टुंगो लागेको हुन्छ । सोही योजनाअनुसार उनीहरू स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउँदै बजार, सार्वजनिक स्थल, मठमन्दिर, खोलानाला सरसफाइमा जुट्छन् ।
‘दुई वर्षदेखि यसरी नै बिदा मनाउने गरेका छौं,’ दवाडीले भने, ‘अभियान बिस्तारै फैलिँदै छ ।’ अध्ययन र कामको समय कटाएर सुरु भएको अभियानले धेरैको मन जित्दै आएको उनले बताए ।
अभियानले चितवनदेखि पश्चिम र पूर्वी नवलपरासीका मुख्य बजार र सार्वजनिक स्थल सरसफाइ हुन्छ । अभियानमा कावासोतीदेखि चितवन र बुटवलसम्मका एक सय युवकयुवती संलग्न छन् । बजारीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा सहरमा चुनौती थपिँदै गएको टोलीका अर्का युवा ओमकार घिमिरेले बताए ।
राष्ट्रिय सरसफाइ दिवसका अवसरमा दुई वर्षअगाडि सहभागी भएका यी युवा एक दिन मात्र औपचारिक कार्यक्रम गरेर सरसफाइ गर्दैमा आफ्नो नगर तथा घर सफाइ नहुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि आपसमा छलफल गरेर बिदाको दिनलाई सफाइ र जनचेतना जगाउने काममा सक्रिय हुने अठोट गरेपछि अहिलेसम्म निरन्तर लागेका छन् ।
गाउँभन्दा सहर फोहोर छ । गाउँमा सरसफाइ वा सामाजिक काम भनेपछि स्थानीय सजिलै सहभागी हुन्छन् । तर, सहरबजारमा सामाजिक कामका लागि सहभागिता न्यून हुन्छ ।
आफ्नै पसलअगाडि सरसफाइ गर्दा पनि पसल सञ्चालक हेरेर बस्छन् । त्यस्ता पसलेलाई पनि अभियान सिकाइ भएको अभियन्ता सुधन लम्सालले बताए । चार/पाँच जनाबाट सुरु अभियानमा अहिले एक सयभन्दा बढी युवा संलग्न छन् ।
उनीहरूले सरसफाइसँगै ट्राफिक सचेतनाको काम पनि गर्छन् । गर्मी समयमा बिहान–बेलुका सरसफाइ र जाडो मौसममा सडक किनारमा बसेर चालक तथा पैदल यात्रीलाई दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा जनचेतना जगाउने काममा व्यस्त हुने गर्छन् । युवाहरू सक्रिय भएर सामाजिक काममा लागेपछि अहिले विभिन्न संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्रममा बोलाउने र जनचेतनामूलक गतिविधिमा सहभागी बनाउन थालेका छन् ।
युवाहरूको सरसफाइमा सक्रियता देखेपछि स्थानीयले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरे । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्ड सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने क्षेत्र हो । यहाँ हरेक दिन सानाठूला दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यिनै युवा प्रहरीसँगको सहकार्यमा सडकमा जेब्रा क्रसिङ निर्माणदेखि चालक र सडक प्रयोगकर्तालाई सचेतना जगाउने अभियानमा पनि सक्रिय भएर लागेका छन् ।
दुव्यर्सनीमा फस्ने उमेरका युवाले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै सामाजिक काममा खटेपछि अभिभावक समेत खुसी भएका छन् । दाउन्नेका शिव अधिकारीले युवकयुवतीले फुर्सदको समयलाई सामाजिक काम र सरसफाइमा लगाएर राम्रो उदाहरण देखाएको बताए । ‘आफ्नै खर्चमा सामाजिक काम । त्यो पनि घुम्ने, डुल्ने उमेरका युवकयुवतीबाट,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लाका युवकयुवतीलाई पनि यस्तो अभियान प्रेरणादायी हुन सक्छ ।’
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०९:३८
१ सय ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण
आश्विन ३०, २०७५ अमृता अनमोल
बुटवल — गाउँ ब्लकका कारण समस्यामा परेका जग्गाधनीले धमाधम व्यक्तिगत पुर्जा पाउन थालेका छन् । स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर नापी कार्यालयसँगको सहकार्यमा धनीपुर्जा वितरण सुरु गरेका हुन् । एक सातामा रूपन्देहीका ३ स्थानमा १ सय ४१ जनाले धनीपुर्जा पाएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका १९ को भुडकैयाका ४९ जनाले आइतबार लालपुर्जा पाए । आफ्नै जग्गा भए पनि प्रमाणविहीन अवस्थामा रहेका उनीहरूले ४८ वर्षपछि जग्गाधनी पुर्जा पाएका हुन् । गाउँ ब्लकको पुर्जा पाएकी १ सय २ वर्षीया लक्ष्मीदेवी आचार्यले बल्ल आफ्नो सम्पत्ति आफ्नै हातमा आएको बताइन् । ‘हामीले नपाए पनि हाम्रा सन्तानले यो जग्गा किनबेच गर्न र बैंकमा धितो राखेर ऋण पाउने भए,’ उनले भनिन्, ‘धेरै प्रयासमा पुर्जा पाइयो ।’
०२७ मा जग्गाको नापी हुँदा घना बस्ती भएकाले यस क्षेत्रलाई एकै ब्लकमा छोडिएको थियो । त्यसयता यहाँका बासिन्दाले पटकपटक नापी कार्यालयमा जग्गाको छुट्टाछुट्टै नापजाँच गरेर व्यक्तिगत पुर्जा दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय तहले समेत दबाब दिएपछि मात्रै नापी कार्यालयले नापजाँच गरेको हो । नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले नागरिकलाई अपनत्व दिलाउन बुटवल उपमहानगरपालिका र नापी कार्यालय भैरहवाले संयुक्त रूपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको बताए ।
ओमसतिया गाउँपालिकाको पडसरी र शुद्धोधन गाउँपालिकाको भुजौलीमा पनि गाउँ ब्लक जग्गाको प्रमाणपत्र वितरण भएको छ । पडसरी ५ को २८० नं. कित्तामा रहेको १ बिघा १३ कट्ठा जग्गाबाट २७ जनाले लालपुर्जा पाएका छन् । शुद्धोधनको भुजौलीमा रहेको कित्ता नं. ७९ को १५ कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा १५ जनालाई वितरण भएको छ । सबै स्थानीय तहमा त्यहाँका पदाधिकारीको रोहबरमा पुर्जा वितरण गरेको नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख जनकबहादुर भण्डारीले बताए ।